Twitter @AsiaLangsOnline 2021 · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Eddie Avila, Yanne C, Laila Le Guen Nandika Salohy Randriafanomezantsoa
Voadika ny 23 Avrily 2021 4:39 GMT
Nanomboka tamin'ny 7 Aprily 2021 ny “andiany” fahatelo amin'ny @AsiaLangsOnline. Ahitana ny fifandimbiasan'ireo mpikatroka fiteny manerana an'i Azia izay hampiantrano ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline ity fanentanana amin'ny tambajotra sosialy ity. Miara-miasa amin'ny Rising Voices, ny Digital Empowerment Foundation ary ny O Foundation, ity fanentanana amin'ny tambajotra sosialy ity dia tohin'ny fanentanana tamin'ny herintaona izay natao tao anatin'ny tontolon'ny Taona Iraisam-pirenena ho an'ny Fitenin'ny Indizeny 2019 ary hanome sehatra ho an'ireo feo maro samihafa manerana ny faritra mba hitantarana ny zavatra niainany tamin'ny famelomana aina indray ny fiteny sy ny anjara asan'ny aterineto ao anatin'izany.
Mandritra ity taona 2021 ity, mpikatroka samihafa no hifandimby isan-kerinandro ao amin'ny @AsiaLangsOnline hizara ny fomba fijerin'izy ireo momba ny maha-zava-dehibe ny fitenin'izy ireo sy ny vondrom-piarahamonin'izy ireo. Samy miasa amin'ny fampiroboroboana ny fampiasana ny tenin'izy ireo amin'ny sehatra vaovao toa ny aterineto, izay ahitana tombontsoa sy fanamby maro ireo mpikatroka ireo. Saingy misy ihany koa ny singa lehibe ivelan'ny aterineto amin'ny fikatrohan'izy ireo mifandraika amin'ny tantara efa ela sy ny toe-javatra ankehitriny izay misy fiantraikany amin'ny fahaveloman'ny fiteny Aziatika.
Misy hetsika tahaka izao mampiasa ny Twitter ho media ifarimbonana any Amerika Latina (@ActLenguas) sy any Afrika (@DigiAfricanLang), any Canada sy Etazonia (@NativeLangsTech), saingy hiompana amin'ny fiteny manerana an'i Azia ity tetikasa ity.
Maro no namaly ny antso tamin'ny fandraisana anjara, satria efa feno ny lisitra mandritra ny herinandro maromaro. Manao fanentanana ihany koa izahay hanasana ny hafa handray anjara. Mifandraisa aminay raha mahalala olona vonona hampiantrano ianao.
2 andro izayBlaogim-Piarahamonina GV